Shirkadda Isgaadhsiinta Telesom Oo Deeqo Lacageed Ku Deeqday Laba Waddo Oo Dhsimohooda Laga Wado Hargeysa – Araweelo News Network (Archive)
Shirkadda Isgaadhsiinta Telesom Oo Deeqo Lacageed Ku Deeqday Laba Waddo Oo Dhsimohooda Laga Wado Hargeysa
Hargeysa(ANN)Shirkadda Isgaadhsiinta casriga ah ee Telesom ayaa deeq maaliyadeed gudoonsiisay Guddidda dhismaha waddada Jameeco weyn iyo Guddida Buundada Xaafada Kililka shanaad ee Magaalada Hargeysa. Xafladda shirkadda Telsom ku gudoonsiisay deeqahaa
labada xaafadood ee Koonfurta iyo Woqooyiga magaalada hargeysa, ayaa saaka lagu goobaha ay ka socodaan shaqaddaa dhimaha waddada iyo Buundada ee xaafadaha Jameeco weyn
iyo kililka shanaad.
Maamulaha xidhiidhka dadweynaha iyo suuq-gaynta ee shirkadda telesom Mr. Yaxye Iid Dhibiil, ayaa sheegay doorka ay shirkadda Telesom ka qaadato horumarinta arrimaha danta guud ee ay bulshadu iskeed iska kaashato, isagoo yidhi, “Waxaa farxad weyn noo ah in aan shirkadd ahaan kala qayb-galno guddida dhismaha wadda jameeco wayn oo ah waddo isku xidhaysa wadda madaarka qabata iyo ta isku xidha xaafada Octobar iyo Star. Run ahaanti markii aanu aragnay shirkad ahaan dad wax qabsanaya oo waddooyin dhisanaya in aan anagu kala qayb-qaadano horumarka, iyaddoo markasta ay shirkaddu kala
Yaxye Iid waxa kale oo uu xusay in shirkadda Telesom ay bulshada ka caawiso dhinacyo badan oo ay ka mid tahay waxbarashadda, caafimaadka, abaaraha iyo baahiyaha kala duwan ee bulshadda. Ugud
danbayntii Waxaa shirkadda Telesom gudoonsiisay Guddida Dhismaha wadda Jameeco weyn Lacag dhan $ 3,000., taas oo ay u qorsheeyeen baahida dayactirka hawshaa.
Shirkadda Telesom sidoo kale waxay deeq lacageed ugu deeqday Guddida dhismaha Buundada wadda tagta xabaalaha Naasa-hablood. Bundadaas oo dhib wayn ku haysa baabuurta sidda mayd-ka iyo bulshada dagan daanta Bariga ee xaafada Sh.Nuur ama Kilil-ka. Haddaba shirkadda Telesom, waxayna dhismaha Buundadaas ugu deeqday lacag dhan $ 2,000.
Madashii lacagtaas lagu kala gudoominaayey waxa ka hadlay maamule ku-xigeenka xidhiidhka dadweynaha iyo Suuq-gaynta Mr. Maxamed Cabdi Darbo, isagoo tibaaxay in shirkadda Telesom ay xil wayn iska saarto inay taageerto baahiyaha aasaasiga ee bulshada. Hadaladii maamule ku-xigeenka MPR-ka Telesom waxaa ka mid ahaa, “Shirkadda Telesom oo ah shirkadda u adeegta bulshadda wax badan ayey bulshada kala qayb-qaadataa sida, caafimaadka, waxbarashada, waddooyinka iyo caawimooyinka dadka dhibaataysan. Shirkadda waxaa u caado ah inay bulshadda ku celiso wixii faa’iido ah, si bulshada loo tuso inay shirkaddu tahay shirkadda ay ummaddu wadda leedahay”.